Cod-bixintii Doorashada Madaxtinimo ee Kenya oo soo xirantay iyo natiijada oo la sugayo – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa goor-dhaw lasoo soo xirmay goobihii codbixinta ee doorashada madaxnimo ee Kenya, iyadoo la sugayo natiijada kasoo baxday doorashadan oo ah mid si weyn dhegta loogu taagayo.
Madaxweynaha Kenya ee xiligan Uhuru Kenyatta iyo Musharraxa xilka kula tartamaya Raila Odinga ayaa labaduba ku baaqay deggenaasho, iyagoo ugu baaqay midnimo guud, iyadoo aan illaa hadda la sheegin wax rabshado ah oo dhacay.
Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa laga sugayaa inay natiijada doorashada ku dhawaaqaan xilliyada soo socda, inkastoo aanay weli sheegin mudada ay rasmi ahaan ugu dhawaaqayaan natiijada hordhaca ah ama ugu dambeysa.
“Shacabka waxaan ugu baaqayaa deggenaan, waxaana aqbli doonnaa wixii natiijo ah ee kasoo baxa doorashada,” ayay Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ku sheegeen hadallo ay siyaabo kala duwan u jeediyeen.
Inkastoo hadalkan ay ku dhawaaqeen haddana Raila Odinga ayaa horay ugu dhawaaqay inuu shaki weyn ka qabo in codadka lagu shubto, balse waxaa si wadajir ah dusha uga eegaya doorashadan ergooyin ka socda waddamo kala duwan oo Afrikaan iyo caalamka ku kala yaalla.
Madaxeynihii hore ee Mareyknakna, Barack Hussein Obama ayaa sheegay in muran kasta oo la xiriira doorashada si nabad ah loo xalliyo, lagu saleeyo si sharci ah, iyadoo loo marayo shacabka iyo ha’yadaha dowladda.
Doorashada Kenya ayaa waxaa mushaaraxiitu ay ku kala bixi doonaan codad hal dheeri ah (50+1), iyadoo musharraxii keensada codad ka badan 50% uu ku guuleysan doono hoggaaminta Kenya.
Ugu dambeyn, weli waxaa daggan xaaladda amni ee Kenya, iyadoo goobaha codbixinta dalkaas laga soo sheegayo inay si nabadgalyo ah ku xirmeen, isla markaana ay socdaan tirinta codadkii maanta ay dhiibteen shacabka Kenya.
The post Cod-bixintii Doorashada Madaxtinimo ee Kenya oo soo xirantay iyo natiijada oo la sugayo appeared first on Ilwareed Online.
Suuqyada Ganacsiga Magaalada Garoowe oo maanta xiran (Waa maxay sababta?)